Faritra Boeny: nametraka ho fanamby ny fiarovana sy fiahina ny mpandraharaha Malagasy eto amin’ny faritra | Région Boeny
Ny fanaparitahana ny fikambanana FIV.MPA.MA manerana ireo faritra eto Madagasikara dia manampy ny fanjakana amin’ny fampirisihana ny mpandraharaha hanara-dalàna sy hiaro ny fampiasam-bola fanitarana ary ahita lalam-barotra ho an’ny rehetra any ivelany hoy ihany ny Lehiben’ny Faritra.
Nitanisa ny momba ny FIV.MPA.MA. ny Filoha nasionaliny, Atoa Erick Rajaonary Filoha tale-jeneralin’ny GUANOMAD ary nampahatsiahiviny fa ny taona 1972 no niorenan’io vondoron’ny mpandraharaha io voalohany tao Antananarivo.
Ho an’i Mahajanga manokana dia 400 no isan’ireo mpikambana avy aty an-toerana tamin’ny taona 2008. Noho ny fatoritorian’ny fikambanana nefa dia nihena ho 60 eo ho eo sisa izy ireo ka dia izao novelomina izao indray hoy kosa ny Filohan’ny sampana.
Mba hamparisika azy ireo dia tokony homena alàlana ihany koa ny mpandraharaha malagasy hoy ny Lehiben’ny Faritra mba hamokarany ireo zavatra takin’ny fenitra iraisam-paritra sy ireo firenena mifandray amin’i Madagasikara hahafahana manao fifanakalozana ara-barotra tsy mitanila amin’ireo mpandraharaha any ivelany.
Ankilan’izay kosa nefa ny fitondram-panjakana dia mila ny fahavononan’ny mpandraharaha malagasy amin’ny fanatsarana ny kalitao sy ny firaisan-kinan’izy ireo mba afahany mitady lalam-barotra hamoahana ny vokatra malagasy sy hifaninana amin’ireo mpandraharaha ao anatin’ny vondrona aty amin’ny faritra Afrika.
Fanamby napetraky ny Lehiben’ny Faritra ny fiarovana ny mpandraharaha malagasy eto amin’ny faritra mba hahazoan’izy ireo vokatra tsara-kalitao, sy ny mba hanandratra azy ireo eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana.